Shabaab oo toogtay labo ruux - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeWararka MaantaShabaab oo toogtay labo ruux
Maxkamadda Al-Shabaab ee ku taalla degaanka Buqaqable ee gobolka Hiiraan ayaa xukun dil ah ku fulisay labo ruux oo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen Jaajuusiin, sida maxkamada Al Shabaab ee Hiiraan ay sheegtay.
Qaadiga maxkamada Shabaab ee gobolka Hiiraan, ayaa meel fagaare ah oo boqolaal ruux ay ku sugnaayeen kaga dhawaaqay in labadaan ruux ay yihiin jawaasiis la shaqeysa, sirdoonada Soomaaliya iyo AMISOM.
Axmed Max’med Abiirkar oo ahaa 33 sana jir ayaa gacanta lagusoo dhigay isagoo la shaqeynayay ciidamada AMIAOM ee ku sugan Jalalaqsi sidda ay sheegeen Al-Shabaab.
Waxaa ay sheegeen Axmed in muddo laba jeer ah cafis loo fidiyay balse markale uu dib ugu laabtay la shaqeynta ciidamada AMISOM waxaana lagasoo qabtay tuulada Buurdheere ugu dambeyntii Al-Shabaab ayaa shalay xukun dil ah ku fuliyay.
Eedaysanaha labaad ee shalay lagu dilay degaanka Buq Aqable oo lagu magacaabo jiray Cabaas Max’med Cismaan ayay shabaab u sheegeen in uu la shaqeyn jiray qeybta sirdoonka ee magaalada Beled Weyne waxaana lagasoo qabtay tuulada Booco ee gobolka Hiiraan.
25 qof oo ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay Ukraine
Haweeneydii ugu horreysay ee Soomaali ah ee duq magaalo ka noqota UK oo iscasishay